Kushongedza kweHalloween Art sens - mazano eimba nebindu
25.10.2012 Yakatumirwa na: Art Sense
Halloween izororo rinocherechedzwa musi waGumiguru 31 kunyanya munyika dzinotaura Chirungu muUK, Ireland, Canada uye US. Iyo inotangira kubva kuzororo revaCelt revaSamhain neCatholic All Saints 'Day.
Mutsika yezororo, zvipfeko zvinotyisa zvinopfekwa, makomba emagetsi anogadzirwa uye vavakidzani vanotenderedza vachitenderera, vachipa maswiti uye maswiti kuvana vadiki kuti vasave "chinangwa" chemitambo yavo.
VaCelt vekare vakapemberera Gore ravo Nyowani - Samhain (Samhain) pakupera kwaGumiguru, pavakakohwa gohwo ravo rekupedzisira. Vakatenda kuti nehusiku hweGore Nyowani, muganho pakati pevakafa nevapenyu wakavhurwa, uye mimvuri yeavo vakafa mugore rapfuura yakanga yashanyira pasi ichitsvaga zvipenyu kuti vagaremo.
Kuti vazvidzivirire kubva pamumvuri, vanhu vakadzima moto mukubuda uye vakaedza kutaridzika sezvisingaite - vakapfeka matehwe emhuka nemisoro, vachitarisira kutyisa magonyeti.
Iwo midzimu yakasiiwa nechikafu chekudyisa uye kwete yekusimbirira kupinda mumba mavo. Uye vagari pachavo vakaungana vakatenderedza moto, uyo wakadzimirwa nevapristi veDruid. Aya maungana aifungidzira nezve nguva yechando uye mhuka dzaakabayira. Pakupera kwekusangana, munhu wese akatora marasha kubva kumoto uye ndokuwaridza nayo.
MuChirungu, zita rehoridhe rinonzwika Zuva reSanta rese kana Hallowmas kana All Hallows. Vanhu vakaramba vachipemberera zuva iri paZuva reVasande vese, vakabatidza moto uye vakapemberera Samhain uye zuva raPomona (mwari wemiti nemichero). MuChirungu chenguva yakapfuura, yainzi izororo All Hallows 'Eve kana kupfupiswa Halloween (Halloween) sekudanwa kwayinoitwa muUSA kusvika nhasi.
Iyo mwenje yeungu inodaidzwa kuti Mwenje Jack. Akatumidzwa zita rakadhakwa reIrish rakakwanisa kuburitsa dhiabhori katatu. Mushure megadziriro yavo yekupedzisira yekurarama hupenyu hune rugare kune mamwe makore gumi, Jack akafa nekukurumidza. Sezvo aive mutadzi, aisakwanisa kuenda kuDenga, uye nekuda kwekubata kwake naDhiabhori haana kukwanisa kuenda kugehena. Ari pamusuwo, dhiabhori akamupa marasha kubva kugehena, akaiswa naJack mune yakavezwa dhirowa, akabva atenderera achitenderera nyika achitarisira Kutonga kwekupedzisira. Kana iyo zororo yakaenda kuAmerica, turnips yakatsiviwa naJack O'Lantern dzungu.
Halloween inamato yechihedheni uye haina chekuita neVose Vasande Zuva, iro iro Chechi yeOrthodox inopemberera paSvondo yekutanga mushure mePentekosti.
Vamwe vanoita fananidzo neBulgaria chechi yechihedheni yekuseka. Izvi zvingangodaro zvisiri izvo, sezvo Halloween chipfeko chemasking itsika yakajairika iyo yakakurumbira muUnited States chete mumakore e30 yezana 20 yezana, nepo maKukitori echitendero chenguva yepamberi pechiKristu chiBulgaria.
Uye mushure mekufungidzira iyo iyo Halloween uye kupemberera, tinopa mamwe "anotyisa" ekushongedza mazano:
urongwa hweHalloween, tafura yefurafura, kurongeka kwemichero, pipi, crows, Vasande Vese, kushongedza, kushongedza, Kushongedza kweHalloween, tafura yekuita tafura, kushongedza, midzimu, zororo revahedheni, yokushongedza kwechando, kurongedza mazano, mazano epamba, mazano eimba, mazano ekushongedza, mazano ehurukuro, Celtic zororo, zvipfeko, halloween zvipfeko, Kubheka, anobata, akafa, Pentekosti, michero, zororo, Kupenya Jack, makenduru, zvigadziko zvemwenje, zvinotapira, sweets, insure, kushongedza kunotyisa, zvinotyisa, zvinotyisa nzvimbo, dzungu, dzungu mwenje, kushongedza, tafura yekuita tafura, Kushongedza kweHalloween, dzungu mwenje, magetsi, dzungu marangi, horo, Halloween nzvimbo, skulls, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Spring yakafuridzirwa nzvimbo
Dzimwe pfungwa dzekushongedza kwematsutso. Maruva anounza zvakanyanyisa kutapira kumhepo ...
Yakanaka mavara meimba yekurara
Sarudza iwo mavara eimba yako yekurara. Mune zvemukati zvemukati zvinokwanisika kusanganisa zvakasiyana ...
Ezai mazai ane vintage ekushongedza
Iyo vintage chimiro chiri kumusoro-kwazvo-pazuva mune zvipfeko, accessories, zvemukati dhizaini, fenicha. Ka ...
Pfungwa dzinoorora ..
Zvinoitika kuti dhizaini yekushongedza ndiyo yekupedzisira yezvemukati sarudzo yatinoita mukubvisa ...
Isita mukanyiwa mabhasiketi
Yakasungwa mukanyiwa mabhasiketi inzira inoratidzika uye yakajeka yekupa chikafu uye Isita ...
Iko kushongedza kwakanaka kwethara
Kana isu tichigara muguta rekugara, furati mhando, iyo chete nzira yekubhadharisa kushomeka kwe ...
Pfungwa dzechitubu chebindu yehari yevhu
Iyo yevhu yehari yegadheni tsime tsime mazano anoratidzwa pano ari nyore kwazvo kuita ...
Mawiricheya mazano mubindu
Kana bhasikoro rako rekare rakareba, saka mune ino chinyorwa tinopa mazano ...
Tsvaga pazvinochengeterwa - Sarudza mwedzi - Kubvumbi 2020 Kurume 2020 Kukadzi 2020 Ndira 2020 Zvita 2019 Mbudzi 2019 Gumiguru 2019 Nyamavhuvhu 2019 Nyamavhuvhu 2019 Chikunguru 2019 June 2019 Mai 2019 Kubvumbi 2019 Kurume 2019 Kukadzi 2019 Ndira 2019 Zvita 2018 Gumiguru 2018 Nyamavhuvhu 2018 Nyamavhuvhu 2018 Chikunguru 2018 June 2018 Mai 2018 Kubvumbi 2018 Kurume 2018 Kukadzi 2018 Ndira 2018 Zvita 2017 Mbudzi 2017 Gumiguru 2017 Nyamavhuvhu 2017 Nyamavhuvhu 2017 Chikunguru 2017 June 2017 Mai 2017 Kubvumbi 2017 Kurume 2017 Mbudzi 2016 Chikunguru 2016 June 2016 Mai 2016 Kubvumbi 2016 Kurume 2016 Ndira 2016 Zvita 2015 Mbudzi 2015 Gumiguru 2015 Nyamavhuvhu 2015 Nyamavhuvhu 2015 Chikunguru 2015 June 2015 Mai 2015 Kubvumbi 2015 Kurume 2015 Kukadzi 2015 Ndira 2015 Zvita 2014 Mbudzi 2014 Gumiguru 2014 Nyamavhuvhu 2014 Nyamavhuvhu 2014 Chikunguru 2014 June 2014 Mai 2014 Kubvumbi 2014 Kurume 2014 Kukadzi 2014 Ndira 2014 Zvita 2013 Mbudzi 2013 Gumiguru 2013 Nyamavhuvhu 2013 Nyamavhuvhu 2013 June 2013 Mai 2013 Kubvumbi 2013 Kurume 2013 Kukadzi 2013 Ndira 2013 Zvita 2012 Mbudzi 2012 Gumiguru 2012 Nyamavhuvhu 2012 Nyamavhuvhu 2012 Chikunguru 2012 June 2012 Mai 2012 Kubvumbi 2012 Kurume 2012